Wararka Maanta: Arbaco, Mar 8 , 2020-Dowladda Soomaaliya oo shirkadda Favori ku wareejisay hotel casri ah oo laga dhisay garoonka Aadan Cadde
Wararka Maanta- Arbaco, Mar 8 , 2020
Hotelkan ayaa lagu magacaabaa DECALE international hotel, waxaana dhismihii ku baxday malaayiin dollar.
Wasiirka qorshaynta iyo maalgashiga qaranka, Jamaal Maxamed Xasan iyo wasiirka ganacsiga Injineer Cabdullaahi Cali Xasan, ayaa Turkiga uga mahad celiyay dhismaha hotelkan, waxayna sheegeen in uu qeyb ka yahay horumarka dalxiiska waddanka iyo in shirkaddaha shisheeye ku dhiirradaan maalgashiga.
Waxaa goobta ku sugnaa safiirka Turkiga ee Soomaaliya, isagoo sheegay dowladdiisu inay mar waliba dhiirri galinayso dib u dhiska Soomaaliya, hotelkaanna uu tusaale wanaagsan u yahay sida ay shirkaddaha Turkiga ugu foogan yihiin inay Soomaaliya maalgashi caalami ah ku sameystaan.
Wasiirka duulista iyo gaadiidka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomaar, ayaa sheegay heshiiska lagu dhisay hotelka inuu yahay mid dowladda Soomaaliya u oggolaanaya in 25 sano kadib uu gacanteeda kusoo laabto.
"Waxaan haysanay saddex iqtiyaar. Labo kamid ah dowladda ayaa mar kasta khasaare ku qabi lahayd. Sidaas daraadeed waxaan qaaddanay heshiiskaan oo ah, in ay shirkaddu iyadu dhisto, oo kadibna ay muddo 25 sanno ah ku shaqeysato kadibna uu gacanteena kusoo noqdo," ayuu yidhi wasiirku.
Wasiir Oomaar wuxuu sheegay laga bilaabo hotelka maalinta la furo illaa dhammaadka heshiiska in dowladda Soomaaliya ay ku yeelandoonto lacago, shaqaaleynta iyo canshuuraadka.